Ny Antony Mahatonga Ny Herisetra Any Andrefan’i Myanmar. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Jona 2012 3:50 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Deutsch, 日本語, bahasa Indonesia, Ελληνικά, English
Lohatenin-dahatsoratra an-gazety i Myanmar tato ho ato noho ireto antony roa ireto : ny fitsidihana manan-tantara nataon'ilay nahazo ny loka Nobel ho an'ny Fandriam-pahalemana Aung San Suu Kyi tany Eoropa sy ny herisetra mianjady any Rakhine fanjakana iray ao andrefan'ity firenena ity .
Manahirana ny manilika ho aminà vondrona iray manokana ny andraikitra amin'ny korontana, vono olona, fandoroana trano izay efa niha-nahazo vahana tato anatin'ity fanjakana ity roa herinandro lasa izay, nefa mazava be fa ireo niharam-boina dia ny olon-tsotra avy amin'ny Arkanais, foko be olona ato amin'ity fanjakana ity sy ireo Rohingyas izay mitady ny hankatoavan'ny firenena azy ho foko.
Araka ny tatitra nataon'ny governemanta dia miisa 2.528 ny trano may hatramin'ny nanombohan'ny fifandonana . 1.192 an'ny Arakanais ary 1.336 kosa ny an'ny Rohingyas. Io tatitra io ihany koa no nilaza fa 29 ny olona maty tamin'ny fifandonana — 13 Arakanais ary 16 Rohingyas.
An'arivony ny olona nandositra noho ny fisian'ny herisetra faobe. Misy toby 37 hatreto mandray ireo niharam-boina miisa 31.884 .
Voasoratry ny ankamaroan'ny gazety matetika fa ny Rohingyas no ‘vondron'olona vitsy an'isa tena iharan'ny fanenjehana mafy any Azia.’ Saingy mizarazara be kosa ny fomba fijerin'ny olona any Myanmar. Raha ny marina , tsy mankato ny Rohingyas ho isan'ny foko ao anatin'ny firenena ny governemanta.
Aung Zaw, tonian-dahatsoratry ny gazety boky the Irrawaddy dia maneho ny fanakianan'ny olona ny Rohingyas
Mpifindra-monina tsy ara-dalàna avy any Bangladesh mpifanolo-bodirindrina aminy ny Rohingya araka ny fiheveran'ny Birmans azy —fomba fijery iray izay mifandraika ihany koa amin'ny olana mahakasika ny fiandrianam-pirenena sy ny tsy fifankahazahoana ara-pinoana.
Araka izany, maro —indrindra ny foko Arakanais— no nanahy fa izany rehetra izany dia endrika disadisa ara-pinoana , na izany aza, maro ny mandranitra ny ady ara-pirazanana sy ara-pinoana amin'ny fifamaliany amin'ny “Bengalis”, izay antsoiny hoe ny Rohingya.
…resaky ny olona eny an-dàlana ny tokony handraisana fepetra henjana ho an'ny Rohingya.
Silamo ny ankamaroan'ny Rohingyas, izay no mahatonga ny fanontanian'ireo olona maro ivelan'i Myanmar raha toa ka fanenjehana fivavahana io miseho io. Etsy andanin'izany, ireo antokom-pivavahana maro any Myanmar dia nandà fa tsy olana ara-pinoana. Namoaka ity fanambarana ity izy ireo andro vitsy lasa izay
1. Tsy vokatry ny disadisa ara-pinoana akory no niandohan'ny fifandonana ao Rakhine fa noho ny fandikan-dalàna.
2. Ny antokom-pinoana rehetra misy ao amin'ny Firaisan'i Myanmar dia efa niara-nonina tamim-pilaminana sy tamim-pihavanana hatramin'izay ary mbola vonona hitàna hatrany izany fomba tsara izany .
4.Mianiana izahay fa hiezaka hisakana ny fipariahan'io herisetra io tsy ho any amin'ny farira hafa eto Myanmar.
May Thingyan Hein dia manoratra momba ireo karazana disadisa samihafa mahakasika ireo korontana any Rakhine.
Ao anaty aterineto, voajery amin'ny fomba fijery maro isan-karazany ireo korontana : ao ny milaza fa hevi-petsin'ny governemanta mba handrebirebena ny fifantohantsain'ny vahoaka momba azy ireo io, ny sasany mihevitra fa fiaraha-miasan'ny governemanta sy ny Arakanais io mba hamongorana ny Bengalis, ny iray farany kosa mahita fa paik'ady ataon'ny Rohingya io mba hisian'ny korontana eo amin'ny governemanta sy Daw Aung San Suu Kyi ary mba hangatahan'izy ireo ny fahaleovantenany ao anatin'io faritra io .
Kianin'i Kyaw Zwa Moe mafy ny haino aman-jery sosialy noho ny fitsofany ny afon'ny kabarim-pankahalana sy fanavakavahana ataony
Nahoana io no mirehitra?
Noho ny ataon'ny haino aman-jery sy ny haino aman-jery sosialy mazava loatra, ireo mpampiasa internet sasany dia maneho tsy amim-piheverana ny sarin'ny vonoan'olona voalohany eo amin'ny kaonty Facebook-ny . Izany dia manaparitaka haingana sy manetsika ny mpampiasa aterineto hafa hizara valin-kafatra entanin'ny fihetseham-po.
Soa ihany fa misy feo tony ney anivon'ny aterineto izay miantso fatratra ho amin'ny fandriampahalemana sy ny firaisana. Dave Gilbert sy Violet Cho dia nanaparitaka ny sasany tamin'ireo sary tao amin'ny Facebook mampiseho ny filaminana ao amin'ny firenena.
Sary avy amin'i New Mandala
Izao no voalazan'ny lovan-tsofina Birmana :
‘Samy tia ny firenenay izahay rehetra. Ndeha hosorohana ny olana mitranga. Aza mamboly tsy fifankahazoana amin'ireo antokom-pinoana isan-karazany. Ilaozy any izay te-hihemotra ho any amin'ny vanim-potoana teo aloha dia handroso isika .’
Mitebiteby ny Peace Warriors noho ny fandrahonana mahazo ny Silamo ao iarngon renivohitr'i Myanmar.
“Tanaty trakitra nozaraina tao Yangon andro vitsy lasa izay, namporisihana hanafika ny Silamo ny olona, ny trano fivavahany, ny trano fivarotany ary ny trano fonenany. Hatramin'ny vehivavy silamo aza no singanina hatao lasibatra. Vokatr'izany dia natahotra ny handeha hamonjy ny asany ny Silamo sy ny Karana (Indiana), eny fa na dia ny handeha irery eny an-dàlana aza . Ireo fianakaviana Silamo sasany moa dia nanidy ny trano fivarotany ary tsy nianatra roa andro ireo sekolim-pinoana sy ireo Oniversite Silamo.”
Ny haino aman-jerim-panjakana New Light of Myanmar dia nitantara ny fitsidihana nataon'ireo manampahefana avy amin'ny governemanta tany amin'ny tobin'ireo niharam-boina .
Noho ny korontana ao amin'ny fanjakan'i Rakhine , nisy miaramila avy any an-toerana nalefa tany ny 8 jona teo mba hamerina ny fandriam-pahalemana, hiaro ny ain'ny olona, hampanjaka ny filaminana sy ny lalàna. Manomboka izao hariva izao, hanome izay fanampiana rehetra ilain'ny olona ao an-toerana ireo miaramila ireo. Etsy andanin'izany, misy sambo maromaro manao andiany nahena ny andraikiny amin'ny fivezivezena fiarovana ny fari-dranomasin'i Myanmar, andrefan'i Maungtaw mba hisorohana ny fidiran'ny olona an-tsokosoko.
Violet Cho dia maniry fomba fijery iray lalindalina kokoa ny zava-misy any Rakhine.
Ny fahantràna sy ny famoretana ataon'ny fanjakana no mitarika mankamin'ny hatezerana izay tsy ho mora velively ny vokany ary azo tarafina ho toy ny fototra iraisana ho an'ny herisetra maneran-tany.
Raha hidirantsika lalina kokoa dia hitantsika fa io herisetra ao andrefan'i Burma dia avy amin'ny fitambaran-javatra sarotra maromaro sy manahirana eo amin'ny lafiny ara-tantara, ara-tsosialy, ara-politika. Angamba tsy maintsy havaozina ireo famaritana sasany efa lany andro, toy ny hoe foko, ary jerena aminà maso hafa izay afaka hanampy hitarika mba ho fampahombiazana ny famakafakana atao.
Vondrona maro mpiaro ny Zon'Olombelona no maniry an’ i Bangladehs sy i Myanmar mba hanokatra ny sisin-taniny ary handray ireo Rohingyas izay mandositra ny herisetra. Ity ambany ity ny antso avy amin'ny Kaomisiona aziatika momba ny zon'Olombelona
…mba hahafahana manome ny sakafo sahaza sy ny fandraisana an-tanana ny ahasalaman'ireo vahoaka tra-pahasahiranana, iangaviana ny governemantanareo roa tonta ireo mba hiara-miasa mba hanome an'ireo masoivoho mpamonjy voina iraisam-pirenena fahafaha-miditra hiasa an-kalalahana sy amim-pahatoniana haingana araka izay azo atao, ary koa ahafahan'ireo vondrona ireo mijery ny zava-misy any an-toerana sy mandamina ny fahatongavan'ny fanampiana vonjy taitra.
Gaga ny ankamaroan'ny mpitolona sy ny mpanao gazety ivelan'i Myanmar fa ireo mpiasam-panjakana bekotro maroholatra avy amin'ny mpanohitra 8888 Generation Student Leaders (Andianà Mpitarika Mpianatra 8888) dia nanao fanambarana manamafy ny andàlan'ny governemanta momba ny tsy fankatoavana ny Rohingyas ho mponina ao Myanmar.
Ko Ko Gyi: Na dia tsy azo ihodivirana aza, tamim-paharetana no niezahanay tsy hiresaka ny olana sasany. Fotoana kosa ankehitriny hanambarànay mazava ny fomba fijerinay ny Rohingya. Ny Rohingya dia tsy anisan'ny foko ao Myanmar mihitsy. Tsapanay fa ny korontana ao Buthedaung sy Maungdaw ao amin'ny fanjakana Arkanais ankehitriny dia vokatry ny fisian'ireo mpifindra monina antsokosoko avy any Bangladesh izay antsoina hoe “Rohingya” miampy ny famporisihina ambadika ataon'ny vondrona iraisam-pirenena sasany. Noho izany, ny fitsabahana toy izany ataon'ny firenena matanjaka sasany amin'ity olana ity (raharaha Rohingya), tsy misy fahalalana feno an'ireo vondrona ara-poko sy ny toe-draharaha hafa misy any Birmanie, dia horaisina ho toy ny fanohintohinana ny fiandrianam-pirenenay.
Satria tsy misy firenena mety mandray ireo olona ireo dia mitsetra ireo vahoaka ireo izahay noho ny maha-olombelona sy maha-mpialokaloka azy. Tsy ho ekenay mihitsy raha ny ny fomba amam-pahendrenay no ho araraotina ka haneren'ny firenena matanjaka anay handray ny andraikitra mahakasika io olana io.
Ny sasany amin'ireo mpikatroka dia te-hahafantatra raha mitovy fijery amin'ny 8888 Generation Student Leaders i Suu Kyi izay miantso ny fampiharana ny lalàna ho vahaolana amin'ny olana ao Rakhine .
Ny governemantan'i Myanma dia milaza fa eo ambany fifehezany izao ny toe-draharaha any Rakhine. Saingy ny fahoriana misy any amin'ireo vohitra Rohingyas dia miha-ratsy isan'andro .